I-Shanshui wena kanye nami-inamagumbi amane okulala ahlotshiswe ngokunethezeka igumbi eline-air conditioning - I-Airbnb
I-Shanshui wena kanye nami-inamagumbi amane okulala ahlotshiswe ngokunethezeka igumbi eline-air conditioning
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Bbbsm
I-Shanshui You and I Apartments inikeza ikhaya elivamile mina nawe. Leli fulethi lisendaweni yokuhlala esezingeni eliphezulu eZhaotong City, uMfula iGengshan wesifundazwe, eduze kwepaki enkulu yokubuka ichibi eZhaotong City ~ Provincial Geng Park; leli fulethi linamagumbi okulala amane namahholo amabili, ukusuka phansi kuya- amawindi uphahla egumbini ophilayo, namakamelo okulala abane namafasitela amakhulu bay, nombhede imitha-1.8 imibhede imitha-1.5 ababili, omunye tatami mat, zokugeza ezimbili (uhlobo olulodwa ezimfushane, uhlobo olulodwa ehlezi);. zasendlini khulula Wi-Fi, 70 -inch TV ye-intanethi, amanzi dispenser, isiqandisi, air conditioner, umshini wokuwasha sigubhu, nezinye izidingo zansuku zonke, umoya amandla Zezıhlabane amanzi inikezwa amahora 14. ekhishini isitofu, Wok, isobho imbiza, ngesitimu, isitsha, ipuleti, izinti, njll . ziphelele ifenisha endlini kuveza abakhiqizi brand odumile, kanye zokulala ukhululekile;. imvelo emphakathini kuyinto enhle futhi ethule, futhi izakhiwo hardware endlini It has konke futhi ifakwe angu-24 isistimu yezokuphepha. Iphephile futhi ivikelekile ukuhlala kuyo. Ngithemba ukukunikeza umuzwa wekhaya. Izithombe zonke ziyizithombe zangempela. Wamukelekile ukunikeza u-Zhaotong umaki ogcwele wedolobha kanye ne-Shanshui Youmei Apartment enophawu olugcwele.
Itholakala maphakathi nedolobha, izungezwe i-Wal-Mart Commercial Circle, i-Shenggengshanshui Commercial Circle, i-Zhaotong First People's Hospital, kanye nohambo lwemizuzu engu-15 ukusuka e-Zhaotong Ancient City. Amabhange, ukudla okulula, ukuthenga, nezindawo zokuzijabulisa zonke ziyatholakala.